कोरोना संक्रमणका हटस्पट : शिक्षण संस्था र होटलका गोष्ठी – Health Post Nepal
कोरोना संक्रमणका हटस्पट : शिक्षण संस्था र होटलका गोष्ठी
२०७७ चैत १४ गते १८:२०
दाङमा थपिए ५८ संक्रमित
वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजाल दम्पतीमा कोरोना संक्रमण
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पतालमा भर्ना भएका अधिकांश कोरोना संक्रमित शिक्षण संस्थामा कार्यरत र होटल गोष्ठीमा सहभागी भएका व्यक्ति छन्।
भिडभाड हुने स्थानमध्ये अहिले विद्यालय पनि एक हो।
पछिल्लो समयमा शिक्षण संस्था कोरोनाको ‘हटस्पट’ को रूपमा देखिन थालेका छन्।
केहीदिनअघि मात्रै पोखराको लामाचौरस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा एकैपटक ७४ जना विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो।
संक्रमण पुष्टि भएसँगै विद्यार्थीको परीक्षा स्थगित भयो।
कोरोना संक्रमण फैलनसक्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले भीडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ।
पुसदेखि अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थी र शिक्षकको भौतिक उपस्थितिमै पठनपाठन गराइरहेका छन्। यसले कोरोनाको जोखिम बढाएको छ।
अहिले अस्पताल भर्ना हुनेमा अधिकांश कलेज अध्यापन गराउने शिक्षक, होटलमा कार्यक्रम गर्न मानिस र तराईबाट स्वास्थ्य समस्या भएर रिफर भएर आएका केशहरू भएका टेकु अस्पतालका निर्देशक डा. सागर राजभण्डारी बताउँछन्।
पछिल्लो समयमा भीडभाड हुने ठाँउमा सहभागी भएका व्यक्तिको संक्रमण हुने क्रम बढेको डा. राजभण्डारीले बताए।
‘अस्पतालमा पछिल्लो समय शिक्षण संस्था र गोष्ठीमा सहभागी भएका संक्रमितको उपचार भइरहेको छ,’ राजभण्डारीले भने, ‘केहीलाई उपचार गराएर घर पठाएका छौं। केहीको उपचार भइरहेको छ।’
विद्यालयहरुले मास्क अनिवार्य, सेनिटाइजर प्रयोग, हात धुनुपर्ने नियम त बनाएका छन् तर, बालबालिकाले सामाजिक र भौतिक दुरी कायम राख्न भने नसक्दा कोरोना जोखिम थपिँदै गएको छ।
‘महामारी नियन्त्रणमा नआउँदै नागरिककातर्फबाट लापरवाही भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले फेरि व्यवहार परिवर्तन गरेनौं भने दोस्रो लहर निम्तिने पक्का छ।’
‘एक वर्षअघिदेखि भीडभाड नगर्नुहोस्। जनस्वास्थ्यको नियम पालना गर्नुहोस भन्दै आएका छौं। तर, मानिसहरूले लापबाही गर्दै गए। जसको कारण विस्तारै अर्को लहर आएको संकेत गरेको छ,’ डा. राजभण्डारीले भने।
विभिन्न राष्ट्रमा कोरोनाको दोस्रो र तेस्रो लहर सुरू भइसकेका छन्। जसले ठूलो जनधनको क्षति गराइरहेको छ।
‘छिमेकी देशमा डबल म्युटेन्ट भेरियन्ट प्रवेश गरिसकेको छ। यसले संक्रमण सार्ने दर एकदमै उच्च छ,’ डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘अहिलेको हाम्रो प्रमुख काम नै सीमानाकामा कडाई गर्ने हो।’
पहिलो लहरमा कोरोना संक्रमितले बेडसमेत पाउन सकेका थिएनन्। कतिपयको आइसियु र बेड नपाएरै मृत्यु भएको थियो।
‘अहिले भारतमा फैलिएको भाइरसको रोग सार्ने क्षमता बढी भएको पाइएको छ। भारतबाट आउने मानिसको व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्न नसके नेपालले ठूलो क्षति भोग्नुपर्ने डा. राजभण्डारीको भनाई छ।
सीमानाकाबाट आउने मानिसलाई क्वारेन्टाइनमा राखेमात्रै धेरै हदसम्म दोस्रो लहर रोक्न मद्दत मिल्ने उनको बुझाइ छ।
अझ समुदायमै संक्रमण भइरहेको अवस्थामा परीक्षणको दायरालाई बढाउनुपर्ने सुझाव संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीको छ।
‘हामीले थाहा पाइरहेको कुरालाई पनि गरिहेका छैनौं। अहिले राज्य तथा नागरिकतर्फबाट नै गल्ती भइरहेको छ,’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘न त नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेका छन् न सरकारले व्यवस्थापनमा कडाई गरेको छ।’
फेरि पनि परीक्षणको दायरा बढाउने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थित बनाउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ चुस्त बनाउँदै लैजानुपर्ने डा. सुवेदी बताउँछन्।
‘नाकाबाट भित्रिएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने तथा अनिवार्य परीक्षण गर्ने र संक्रमितको सम्पर्कमा आएका मानिसको कन्ट्याक्ट टे«सिङ गर्नुपर्छ,’ डा. सुवेदीले भने, ‘पहिला भएका संरचनालाई तीव गतिमा सुचारू गर्नुपर्छ।’
हाल पिसिआर कम संख्यामा भएको हुँदा अझै पनि संक्रमण कति फैलिएको छ भन्ने एकीन हुन नसकेको उनको भनाई छ।
‘अहिले नाकानाकामा पिसिआर परीक्षण निःशुल्क गर्नुपर्छ। सीमामा परीक्षण गर्दा केशहरू पत्ता लाग्दै जान्छ। हजारौंजना संक्रमण हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। लकडाउन नै गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन,’ उनले भने।
विभिन्न ठाउँमा नयाँ भेरियन्ट फैलिएको हुनाले नेपालमा पनि आएको हुने आशंका गरिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल बताउँछन्।
युकेमा देखिएको भेरियन्ट एक सयभन्दा बढी राष्ट्रमा फैलिसकेको छ। त्यस्तै, दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको भेरियन्ट ५५ भन्दा बढी राष्ट्रमा देखिएको छ। र, ब्राजिलको भेरियन्ट २५ भन्दा बढी देशमा पुगेको छ।
‘भारतमा तीन थरी भेरियन्ट देखिएको छ। र, नयाँ प्रकारको पनि भेरियन्ट देखिएको छ,’ डा. पौडेलले भने, ‘जसले गर्दा नेपालमा पनि अत्यधिक जोखिम छ।’
नयाँ–नयाँ भेरियन्टको कोरोना आशंका गरिएकाले पनि खोप लगाएर ढुक्क हुने अवस्था नरहेको उनले बताए।
नयाँ भेरियन्टको कोरोनालाई खोपले प्रभाव पार्ने वा नपार्ने अध्ययन तथा अनुसन्धान हुँदै छ। त्यसकारण खोप लगाएर मात्रै ढुक्क हुने अवस्था नभएको डा. पौडेललेको भनाई छ।
‘भारतबाट नेपाल फर्किनेको लाइन लागेको छ। नाकामा नै संक्रमित पुष्टि भएकालाई अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने गरी निर्देशन दिइएको डा। पौडेलले बताए।
भाइरसले जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो स्वरुप परिवर्तन गरेर नयाँ स्वरुपको विकास गरिरहेको छ। भारतमा तीन–चार थरी भेरियन्ट फैलिएकाले थप सचेत हुनुपर्ने डा. पौडेल बताउँछन्।
‘जे–जे भेरियन्ट आएपनि माक्स लगाउने, दुरी कायम गर्ने, हात धुने। यी तीन अस्त्रको प्रयोग गर्नुपर्दछ,’ उनी भन्छन्, ‘खोप लगाएको छु भनेर जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नअपनाउने बेला भएको छैन। भाइरसबाट बच्न अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्यको मापदण्ड नै पालना गर्नुपर्छ।’
डा. पौडेलले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिनको लागि सीमानाकामा आउने सबैलाई अनिवार्य १० थान मास्क वितरण गर्ने कार्य भएको बताए।
त्यसै, अब कोरोनाको दोस्रो लहरलाई बढ्न नदिन यातायातमा दुरी कायम, विद्यार्थीलाई सिफ्ट अनुसार अध्ययन गराउने, उद्योग, कलकारखानामा सिफ्ट अनुसार चलाउनुपर्ने डा. राजभण्डारीको सुझाव छ।
‘अब लकडाउन विकल्प होइन,’ उनी भन्छन्, ‘भीडभाड हुने ठाउँलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजाने हो।’
नागरिकले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गरे मात्रै संक्रमणबाट जोगिनसक्ने उनको भनाई छ।
Tags: कोरोना संक्रमण, सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरूवा रोग अस्पताल